स्थायी शिक्षकको विज्ञापन मंसिर दोश्रो साता हुने पक्का, कुन जिल्लामा रिक्त दरबन्दी कति? (विवरणसहित) - Khabar Center
स्थायी शिक्षकको विज्ञापन मंसिर दोश्रो साता हुने पक्का, कुन जिल्लामा रिक्त दरबन्दी कति? (विवरणसहित)
काठमाडौं । शिक्षक सेवा आयोगले तिहारलगत्तै स्थायी शिक्षकको विज्ञापन खुलाउने तयारी गरेको छ । तिहार लगत्तै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलसँग छलफल गरी विज्ञापन खोल्ने तयारी रहेको आयोगका सूचना अधिकारी सुदर्शन मरहट्टाले जानकारी दिए ।
आयोगलाई शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले बुझाएको तथ्यांक अनुसार तीन तहमा १९ हजार बढी विषयगत शिक्षक पद रिक्त भएको छ ।
नियमावली संशोधन नहुँदासम्म वार्षिक कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न र शिक्षक बढुवाको लागि विज्ञापन खुलाउन भने समस्या हुने आयोगले जनाएको छ । संस्कृतमा निमावितर्फको पाठ्यक्रम नबन्दा शिक्षक दरबन्दीका लागि विज्ञापन खोल्न समस्या भएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका सूचना अधिकारी सुदर्शन मरहट्टाले भने, ‘हामीलाई अहिले संस्कृत तर्फको पाठ्यक्रम नबनेर समस्या भएको छ । पाठ्यक्रम बने पनि तीन महिनाअघि लागु नहुने नियमले समस्या परेको छ ।’ बाँकी रहेको पाठ्यक्रम बनाउन थालिएको सूचना अधिकारी मरहट्टाले जानकारी दिए । श्रोतका अनुसार मंसिर दोश्रो साता बिज्ञापन हुने टुंगो लागेको छ।
यस्ताे छ जिल्ला गत रिक्त दरबन्दी विवरण ;
प्रकाशित मिति :मंसिर ३ २०७८ शुक्रवार - १६:२१:३१ बजे